Sida loo sameeyo mashiin tattoo oo guriga lagu sameeyo, oo leh fiidiyow | Tattoo
Sida loo sameeyo mashiinka tattoo guriga lagu sameeyo (fiidiyow)
Ha isku dayin guriga. Adoo ka tagaya tan cad, waxaan u arkay inay tahay mid aad u xiiso badan inaan dhamaantiin idinla wadaago tan yar laakiin muuqaal ah video-ga waqtigiisa taas oo naloo muujiyey cSida loo sameeyo mashiin tattoo oo guriga lagu sameeyo. In kasta oo ujeeddada fiidiyowgu ay tahay in nala tuso sidee mashiin tattoo loogu sameyn karaa gudaha xabsiga, waxaan ku dabaqi karnaa xaalad kasta tan iyo walxaha loo isticmaalo abuurista "mashiinka tattoo" iyagu waa kuwa ugu maalinlaha ah.
Qalin, dhowr clips, Walkman iyo dhowr xarig oo caag ah ayaa ah walxaha kaliya ee aan u baahanahay si aan awood ugu yeelano inaan sameyno mashiinka guryaha lagu sameeyo ee guryaha lagu sameeyo. Gudaha xabsiyada Mareykanka gudihiisa waxaa kujira dhaqan-hoosaadyo dhan oo dunida tatuuga ah. Iyo sida ilaalada iyo saraakiisha xabsiga aysan u ogolaan soo bandhigida mashiinada tattoo Caadiga ah, maxaabiistu waa inay raadiyaan beddelaad kale si ay awood ugu yeeshaan inay maqaarkooda ku calaamadeeyaan baararka gadaashiisa.
Fiidiyowgaan ayaa ahaa oo ay sameeyeen wiilasha «A&E» munaasabadda hordhaca dhow ee documentary «60 maalmood gudahood». Filim dokumenti ah oo ka hadlaya riwaayad dhab ah oo cusub oo toddobo kaqeybgalayaashu ay daba socdaan kuwaas oo, si iskood ah, u saxiixay ogolaanshahooda xabsiga si ay ula qaataan 60 maalmood dadka maxaabiista ah iyadoo aan loo maleyneynin inta kale ee maxaabiista iyo saraakiisha xabsiga inay ogyihiin xaqiiqadooda.
By habka, waxaan ka warqabnaa in video waxaa jira hadal ah "Tattoo gun" marka ereyga saxda ah uu yahay mashiinka tattoo. Si kastaba ha noqotee, oo markaan aragnay tayada fiidiyowga, waan cafinnay qaladkan weyn. Adigoon ku sii dheerayn, fiiri fiidiyaha oo nala wadaag fikirkaaga.
Xigasho - Inked Mag
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Sida loo sameeyo mashiinka tattoo guriga lagu sameeyo (fiidiyow)
Micnaha iyo astaamaha taatikada ubaxa
Tattoos oo leh weedho dhiirrigelin ah nolol maalmeedka